Naya Drishti | पोर्न भिडियो निर्माण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रा महिनामा कति कमाउछन ? - Naya Drishti पोर्न भिडियो निर्माण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रा महिनामा कति कमाउछन ? - Naya Drishti
साउन ०७, सल्यान । अश्लिल भिडियो निर्माण तथा प्रशारण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका भारतीय व्यवसायी राज कुन्द्रा अकुत सम्पत्तिका मालिक हुन् ।
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीसँग विवाह गरेका राजको मुम्बईमा १ सय करोड ९भारतीय रुपियाँ० को बंगला छ ।
अश्लिल भिडियो राजको पैसा कमाउने तरिका हो । उनका व्यवसाय थुप्रै क्षेत्रमा फैलिएको छ । राजले फेशन उद्योग, रियस स्टेट, कन्स्ट्रक्सन, स्टील प्लान्ट, फोरेक्स इनभेस्टमेन्ट, सतयुग गोल्ड, सुपर फाइट लिग र मुम्बईमा फुड चेन जस्ता कामसँग जोडिएका छन् । एक वेभसाइटका अनुसार राजको कमाई लगभग १०० मिडियन डलर रहेको छ ।
राज भारतका सफल व्यवसायीको सूचिमा पर्छन् । उनी सन् २००४ को ब्रिटिश म्यागाजिनमा ब्रिटिश एशियन धनिहरुको १९८ औं स्थानमा रहेका छन् । उनको त्यसपछि सम्पत्ति बढिसकेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा उनको सम्पत्ति ८० प्रतिशत बढेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार उनी हरेक महिना १०० करोड ९भारतीय रुपियाँ० कमाउँछन् । उनको एक वर्षको कमाई १२०० करोड छ । उनको कूल सम्पत्ति २९०० करोड छ ।